ပါးစပ်နဲ့ကာမဂုဏ် ခံစားမှု က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်တင်းနှောမှုမှာ ပိုအရေးပါလာ Update | Freedom News Group
ပါးစပ်နဲ့ကာမဂုဏ် ခံစားမှု က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်တင်းနှောမှုမှာ ပိုအရေးပါလာ Update
by FNG on August 5, 2012	နယူးယောက် တက္ကသိုလ် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ
ကျန်းမာရေး လေ့လာမှု သုတေသန စင်တာ
က ပါးစပ် နဲ့ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ချစ် တင်း
နှောတာ ဟာ ချစ်တင်းနှော မှု ပုံစံ အမျိုး မျိုး ရဲ့ 
၃၅ ရာခိုင်နှုန်း နေရာ ကို ယူထား တာကြောင့်
ဒုတိယ အရေး ပါ ဆုံး ဖြစ်လာ နေ ပြီ လို့ 
တက္ကသိုလ် ရဲ့လေ့လာ စမ်းဆစ်မှု တစ်ခု
ကို အခြေခံ ပြီး စာတမ်း ထုတ် ပြန်ပါတယ်။
နယူးယောက် တက္ကသိုလ် ရဲ့ကနဦး လေ့လာ ချက် မှာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်း
သား အယောက် ၅၀ စီ က နေ စစ်တမ်း ကောက် ယူထား ပြီး ဒီစစ် တမ်း မှာ ကျောင်း သူ
၇၀ ရာ ခိုင်နှုန်း က နှုတ်ခမ်း နဲ့အနမ်း ချွေ တာ ၊ ခန္တာ ကိုယ် နေရာ အချို့ကို စုပ်ယူနာ ကျင်
အောင် လုပ် ပြီး လိင် ဆက်ဆံ တာ တွေ ကို လိင် ဆက်ဆံ တဲ့ အခါ တိုင်း မှာ လုပ် လေ့ ရှိ
တယ် လို့ဆို ပါတယ်။
ကျောင်းသား တွေ ကို ပြု လုပ် တဲ့ စစ်တမ်း မှာ တော့ ကာမ စပ် ယှက် မှု မျာ ပါး စပ် ကို
အသုံး ပြုတာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် ပဲ ရှိ ပြီး မိန်းကလေး တွေ ထက် စိတ်ဝင်စား မှု ပို နည်း
တယ် လို့သိရ ပါတယ်။ ကျောင်းသား တွေ ဟာ သူ တို့ရဲ့ချစ်သူ တွေ ထက် ကာယှက် တဲ့ အခါ
သမရိုး ကျ နည်း ကို သုံးပေမယ့် ရံဖန် ရံ ခါ မှာ တော့ ချစ်ကြွမ်း ၀င်မှု လေး နက် စေလိုတဲ့ အတွက်
ပါး စပ် နဲ့ခံစား မှု အာရုံ ပေး တာ တွေ ကို အချိန် အတော် ကြာကြာ လုပ် ဆောင် တယ် လို့ဆိုပါ
အင်္ဂလန် က Female First မဂ္ဂဇင်း ကြီး ရဲ့စစ်တမ်း ကောက် ယူမှု မှာ ဖြေဆို တဲ့ မိန်းကလေး
၂၀၀ ထဲ က ၁၆၄ ဦး ဟာ လည်း သူတို့ရဲ့ပါးစပ် နဲ့လျှာ တွေ ကို အသုံး ပြု ပြီး လိင် ဆက်ဆံ
ရတာ ကြိုက် သလို ၊ ချစ်သူ ၊ခင်ပွန်း စသူ တို့ရဲ့ပါးစပ် နဲ့ဖျော် ဖြေ မှု ကို လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ
သဘော ကျတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
Fox သတင်းဌာန က စီစဉ် တင် ဆက် တဲ့ Sex on Fox အစီအစဉ် မှာ ပါဝင် ဖြေကြား ပေး
တဲ့ ဆိုင်ရာကျု တက္ကသိုလ် က ကျောင်း သူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အေမီ ချိစ်ဆာမယ်(လ)ဒို က သူ
ဟာ လျှာ က နေ ၊ ပါးစပ် က နေ ရလာ တဲ့ အထိ အတွေ့ ကို ပို ပြီး သဘော ကျ ကြောင်း ဒါဟာ
မိန်းမ အင်္ဂါ ယောနိ ပြီး တဲ့ နောက် ပုရိသ တွေ ကို ပို ပြီး ဆွဲ ဆောင် စေမယ့် အချက် ဖြစ်တယ်
လို့လဲ ပြောပါတယ်။
ဒါကြီး ကျယ် ခမ်းနားတဲ့ ချစ်ဗိမ္မာန်တည်ဆောက် ရေး မှာ အဓိက ကျတယ်။ ပါးစပ် နဲ့လျှာ
ဟာ အရသာ အာရုံ ခံစား မှု ရဲ့အရေး ပါတဲ့ အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်တာ ကြောင့် ဒီနည်းလမ်းနဲ့ 
လိင် ဆက်ဆံ တာ ပို ပြီး ဆန္ဒ ပြည့် ၀ စေတယ် လို့Female First စစ်တမ်းမှာ ပါဝင် ဖြေ
ဆိုသူ တွေ က ပြောပါတယ်။
နယူးယောက် တက္ကသိုလ် ရဲ့စစ်တမ်း ကို ကိုး ကား ပြီး ဖော်ပြထား တဲ့ နယူးယောက် ဒေးလီး
နယူး သတင်း စာ ကတော့ ဒီလိင် ဆက် ဆံ နည်း ကျယ် ပြန့် လာတာ ဟာ ခောတ်သစ် လူနေ
မှု စနစ် ကို အခြေခံ တယ်။ မော်တော် ကား ၊ လုပ်ငန်း ခွင် အတွင်း နဲ့မတော်တဆ ရင်းနှီးမှု
တွေ မှာ ဒီနည်း လမ်း က နေ ကာ မ စပ်ယှက် မှု တွေ ပြု ကြ တယ် လို့ဖော်ပြထား ပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ကား တွေ မှာ လည်း ကာမ ဂုဏ် အာရုဏ် ခံ စားမှု တွေ ကို နည်း အမျိုးမျိုး နဲ့ ဖော်ပြ
လာခဲ့ တာ က တစ်ကြောင်း ၊ လိင်ဖျော်ဖြေရေး ဗီဒီယို တွေ မှာ တွေ့ ရတဲ့ ဆန်းကြတယ့် ချစ်
တင်း နှော မှု တွေ ဟာ ခေတ်ကာလ စုံ တွဲ တွေ ရဲ့ကာမ စပ်ယှက် မှု ကို အများ ကြီး သက်
ရောက်မှု ရှိတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ကာမ စပ်ယှက် မှု မှာ လူတွေ ဟာ သား ရဲ ဘီ လူး လို ဖြစ်လာ ကြ တယ် အီလီနွိုက်(စ) တက္ကသိုလ် (ချီကာဂို) က ပြုလုပ်
တဲ့ လေ့လာ မှု တစ်ခု မှာ ဖော်ပြ ထား ပေမယ့် ။ ရိုက် နှက် နာကျင် ပြီး ကာမ ဆက်ဆံ တာ ဟာ ကာမ ဆက် ဆံ မှု တွေ ရဲ့၆ ရာ ခိုင် နှုန်း ပဲ ရှိ သေး တဲ့ အတွက် ၄၀ ရာခိုင် နှုန်း လောက် ဖြစ် နေတဲ့ Oral Sex ကို မမှီ သေး ဘူး လို့၊ အမေရိကန် အခြေစိုက် ကူးစက် ရောဂါ များ ပြန့် ပွား မှု ထိန်း ချုပ် ရေး ဌာန က ညွှန်ကြား ရေး မှုး ဂျေ ဂျေ အပ်ဟိုလ်ဆန် က ရိုက်နှက်
နာ ကျင် မှု တွေ လုပ် ပြီး လိင် ဆက် ဆံ တာ ၂၀၀၀ ခု နှစ် မှာ ၃ ရာ ခိုင် နှုန်း လောက် ပဲ ရှိ ခဲ့ ပြီး ၂၀၁၀ ရောက် တော့ ၆.၂
ရာ ခိုင် နှုန်း ရောက် သွား တယ်။ Oral Sex က ၂၀၀၀ ခုနှစ် မှာ ၃၂ ရာ နှုန်း ရှိ ပါတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
Female First က ပြု လုပ် တဲ့ စစ်တမ်း မှာတော့ အစာသွင်း လမ်း ကြောင်း နဲ့ကာမဂုဏ် အာရုံ ခံစား မှု ပြု တာ ကို မိန်း ကလေး တွေ က ပို နှစ် သက် ကြ ပြီး ၊ အသက် အပိုင်း အခြား အရာ ဆယ် ကျော်သက် က နေ အသက် ၃၀
အတွင်း အရွယ် တွေ က ကြိုက် နှစ်သက် ကာ ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တွေ ၊ ကော်လာ ဖြူ ၀န်ထမ်း တွေ နဲ့နည်းပညာ
၀န်ဆောင်မှု လုပ် ငန်း တွေ မှာ လုပ် နေတဲ့ သူ တွေ ဟာ ဒီနည်း လမ်း ကို စွဲ မက် ကြ တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ချီကာမြို့က ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆိုင် ရာ ဆော့ဖ်ဝဲလ် တီထွင် မှု ကုမ္ပဏီ က ဂျန်း ရှုလ်ချေဇ် က တော့ သူ့ ရဲ့ချစ်သူ
နဲ့တွေ့ ဆုံ ဖြစ်တဲ့ အခါ တိုင်း ကျွန်မ တို့နှစ်ယောက် စလုံး အကြိုက် ချင်း တူ တဲ့ နည်း ကို ပဲ အသုံး ပြု တယ်။
သူ က အဲဒီ မှာ အချိန် အတော် ကြာကြာ ကျွန် မ အကြိုက် လိုက် ပေး တယ် ….. ကျွန် မ အရမ်း သဘောကျတာ
ပဲ လို့ပြောပါတယ်။
Evolution of Human Sexuality, Sexual Health, Sexual Behavior, Oral Sex
Sexting: More Common Than You Might Think (huffingtonpost.com)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: လူမှု ဘ၀, ဆေးသိပ္ပံ	← Myanmar energy tycoon lobbies for smart sanctions
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးက ဝေဖန် ပြောဆို →
November 5, 2012	wwww	#
September 29, 2012	wwww	#
good.oh very good
September 29, 2012	ုkyawzeya	#
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကိုသိဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကပန်းကလေးကို မထိရက်မချွေရက်၊ မနမ်းရက်နဲ့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ပုဝါတစ်ကမ်းနေရတာ ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချစ်လို့ မှတ်ယူခဲ့ပေမယ့် ကြားလူ လက်မြန်ခြေမြန် လက်သွက်ခြေသွက်သမားရဲ့ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းအချစ်မှာ ရင်တွေလှိုက်ခုန်၊ အသည်း အူတွေတုန်ပြီး တစ်သက်တာလုံးမခံစားဘူးခဲ့ရတဲ့ အချစ်အရသာ သူနဲ့တွေ့မှ သိရတာ ကျေးဇူးတင် လိုက်တာဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကျောခိုင်းသွားတဲ့ချစ်သူရှိခဲ့ဖူးတော့ . . .။
August 21, 2012	h1714167	#
ခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ စည်းပြင်ကလူတွေ လို့ပဲပြောချင်တယ်။
August 10, 2012	h1504584	#
အဆင့်နိမ့်စိတ်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်စိတ် မကုန်သေးတဲ့ လူတွေ တိုးပွားလာလို့ပါ။
August 7, 2012	loveguy	#
ဘယ်တိရိစ္ဆာန် ပါးစပ် နဲ့ ဆက်ဆံ လဲ………….
August 8, 2012	Kaung	#
အဲ့လို ပြုလုပ်တာက ဘယ်လို ရောဂါတွေကိုကူးစပ်နိုင်ပါသလဲ?
August 7, 2012	phyo	#
This can transmit sexually transmitted diseases such as syphillis , HPV that cause genital herpes and others unusual virus and bacteria infection that previously occur in genital to oral mucosa !
HIV cannot transmit via saliva but if ejaculate into oral mucosa or ulcer or bleeding point presence at penile or vulva or mouth ,there may havearisk of transmission to partner!
August 7, 2012	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,727,224 hits